Ogaden News Agency (ONA) – Britain oo ka baxaysa Midowga Yurub.
Britain oo ka baxaysa Midowga Yurub.
Posted by Daljir	/ June 24, 2016
Aftidii dadweynaha Britishka laga qaadey malintii khamiista ayaa tirinteedi soo gaartey tan iyo subaxnmada Jimacada, waxaana guushu raacdey dadka u codeeyey in Britain isaga baxdo Midowga Yurub, kadib habeen aad u dheer oo dadka Britishku aaney seexan ayaa in ay Midowga Yurub ka baxaan u codeeyeen 51.9, halka dadka u codeeyey in ay ka sii mid ahaadaan Midowga Yurub ay heleen 48.1
Si kale hadii loo dhigo dadka u codeeyey in ay isaga baxaan Midowga Yurub ayaa gaarayey 17.4 milyan oo qof, halka kuwa weli doonaayey Midowga Yurub ay gaarayeen 16.1 milyan oo qof.
Kadib markii ay soo baxdey in Britain ay isaga baxayso Midowga Yurub ayaa waxaa dhulgariir dhaqaale ku dhacay suuqyada dhaqaalaha, gaar ahaan kuwa Aasiya, waxaana subaxnimada Jimacada ku xigey kuwa qaaradda Yurub, waxaa si weyn hoos ugu dhacay qiimaha sarifka ee lacagta Istarliinka ee Ingriiska, waxaana uu gaarey meesdsii ugu hooseysey muddo 30 sano ah.
Madaxda Midowga Yurub ayaa hadda isugu imaanaya shir deg-deg ah oo daba socda natijada dadka Britishka ee ah in ay isaga baxaan EU.
Dalka Britain ayaa ah mid aad u qabysan marka la eego natiijada, labada gobol ee Scotland iyo Waqooyiga Irland oo ka mid ah Midowga Boqortooyada ayaa si weyn loogu codeeyey in ay ka sii mid ahaadaan Midowga Yurub, halka Wales iyo England looga codeeyey in ay isaga baxaan, waxaana la is weydiinayaa sida Britain u ekaan doonto sanadaha soo socda.
Nigel Farage ee hoggaamiya xisbiga xagjirka midigta fog ah ee UKIP ayaa shegey maanta in a tahay malintii ay mar kale dib u xoreebeen
-Halanoo oggolaado in 23 Juun ay tahay maalin taarikhi ah oo qaran ayuu yiri hoggaamiyaha UKIP Mr Nigel farage.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Jarmalka Frank Walter ayaa maanta ugu yeeray maalin madow oo Midowga Yurub soo marta.
Aftida dadweynaha laga qaadey waxaa keeney markii Midowga Yurub awoodiisi badatey, sharciyo badan dalalka ka mid ah looga soo yeeriyo Brussels, sidoo kale waxaa Britain ku soo jabey shaqo doon badan oo ka tegey dalalka fakhriga ah ee bariga Yurub kuwaas oo ka faa’ideysanaya sharciyada EU.
David Cameron oo is casiley
Raysalwasaaraha dalka Britain ahna hoggamiyaha Xisbiga Conservative David Cameron ayaa ku dhawaaqey in uu xilka ka degaayo, isla markaana xiliga dayrta ah shirka Xisbigiisa uu ku wareejin doono qofka la doorto, waxaana uu ku tilmaamey maanta in ay tahay maalin murugo oo Yurub u soo hoyatey. Waxay u badan tahay in uu xilka kala wareego saaxiibkiisi yarantiisi Boris Johnson duqii hore ee London oo hoggaaminayey ol-olaha Midiwga Yueub looga baxaayo.
Muddada ka bixitaanka UK ee Midoiwga Yurub ayaa qaadan doonta waddo dheer oo gareysa tan iyo sanadka 2017, waxaana ay sii yeelan doonaan xaalad gaar ah maadaama guurka kala dhexeeyey Midowga Yurub aaan hal habeen lagu burburin karin.